Annaga Ku saabsan - Hebei Pukang Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Hebei Pukang Qalabka Caafimaadka Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1996, iyada oo ah shirkad yar oo caasimad ka diiwaan gashan RMB 500,000, dhul dabaq ah oo ah 16.3 muun iyo kaliya tiro yar oo shaqaalaha markii la aasaasay. Maalmahan, shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista sariiraha kalkaalinta caafimaadka, alaabta caafimaadka, qalabka nalka casriga ah iyo alaabada kale, oo ay ka diiwaan gashan tahay RMB 120 milyan, dhul dabaq ah oo ah 180 mu, dhisme oo ah 92,000 mitir murabac, in kabadan 580 shaqaale iyo wax soo saarka sanadlaha ah ee 200,000 unug (gogo ').
Shirkadda ayaa gudbisay shahaadada nidaamka tayada sare ee ISO 9001, shahaadada tayada tayada ee ISO 13485, shahaadada EU CE, shahaadada US FDA, shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ee ISO 14001, OHSAS 18001 shahaadada nidaamka caafimaadka iyo maaraynta nidaamka badbaadada shaqaalaha, waxay u adeegtaa sidii alaab-qeybiyaha iibka qalabka caafimaadka ee Qaramada Midoobay. iyo shirkad Shiinaha u qoondeysay yareynta saboolnimada iyo qalabka caafimaadka injineernimada. Astaanteeda 'Kalkaaliye Caafimaad yar' waxaa loo aqoonsaday "Hebei Famous Trademark" waxaana badeecada lagu qiimeeyay "Hebei Famous Brand Product", kuna guuleysatay in ka badan 30 maamuus oo ay ku muteysteen qaran, degmo, degmo iyo waaxyo kale.
Shirkaddu waxay hadda leedahay qalab wax soo saar xirfadeed oo horumarsan, sida mashiinka goynta laser-ka laga keeno Jarmalka, caajiska iyo xarunta warshadaynta (USA), robotka laga soo dhoofiyo Japan, mashiinka goynta tuubada laser, xariijinta rinjiga rinjiga (iskaashiga Mareykanka iyo Mareykanka) iyo wixii la mid ah soo baxay.
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay ku faantaa koox farsamo yaqaan ah oo mashiin ah, elektiroonig, muuqaal muuqaal ah, iwm, R&D madaxbannaan oo ka mid ah alaabada daryeelka caafimaad ee kala duwan iyo awood buuxda si ay u qalabeeyaan cisbitaalada heerarka oo dhan. Shirkadda ayaa gaartay in ka badan 100 patentiyo ah, waxay door hoggaamineed ka ciyaareen isla warshadaha dalka oo dhan, waxaa lasiiyay cinwaanno 'Xarunta Farsamadda' ee gobolka, Shirkadda "Teknolojiyadda Sare ee Gobolka", "Sayniska iyo Teknolojiyada", waxayna sii waday muddo-dheer. is-weydaarsiga farsamada, is-dhexgalka shaqaalaha iyo iskaashi kale oo lala yeesho Jaamacadda Tianjin, iyo sidoo kale Teknolojiyadda Beijing iyo Jaamacadda Ganacsiga. Sannadkii 2017, shirkaddu waxay heshiis iskaashi istiraatiiji ah la saxiixatay Beijing Aerospace Long March Launch Vehicle Technology Co., Ltd., iyada oo calaamad u ah tallaabo cusub iyo tallaabo adag oo si wada jir ah loogu abuurayo ilbaxnimo caafimaad oo tiknoolajiyad hawada sare.
Tan iyo markii ugu horeysay “Kalkaaliso yar"Sariirta kalkaalinta kalkaalinta naaxinta badan waxaa la aasaasay sanadkii 1997, shirkaddu waxay soo martay kor u qaadida wax soo saarka toddobo qarni, waxay kasbatay abaalmarino badan, iyadoo ay joogaan ganacsigu in kabadan 100 waddan iyo gobollada Yurub, Aasiya, Afrika iyo Ameerika, waxayna dhiseen xiriir ganacsi oo muddo dheer socday. boqolaal ka mid ah isbitaallada Fasalka III-A ee dalka oo dhan. Dhanka kale, ujeedada macaamiisha sifiican loogu adeegayo, shirkadu waxay dhistay xafiisyo iyo adeegyo iib iib ah ka dib in kabadan 20 gobol oo Shiinaha ah.
Shirkaddu waxay u hoggaansami doontaa inay sameyso wax soo saarka dawooyinka sida weyn ee ay u tahay waajibaadkeeda, ilaalinteeda caafimaadka shaqadeeda, iyo dhisida shirkad bartamihiisu tahay hadafkeeda, kor u qaadida muhiimnimada shirkada iyo ku biirinta awooddeena horumarinta warshadaha aaladda cilmiga caafimaadka oo ku saleysan habka sayniska iyo habka wax ku oolka ah. .